Mascara for voluminous, long, curved and deep black lashes24
Creamy texture နဲ့ Lash Millionizer brush ကြောင့် ဆေးတွေစုပုံခြင်းမရှိဘဲ မျက်တောင်တွေကို တိကျပြည့်စုံစေပါတယ်။
#lashesonfleek! ထူထဲစတေယျ ၊ ရှညျလြားစတေယျ၊ ကော့ညှတျစပွေီး ၊ ထူထူထဲထဲ မဲမဲနကျနကျ မကျြတောငျကို ရရှိစပွေီး တနကေုနျ ၂၄နာရီကွာသညျအထိ လှပနစေပေါတယျ။ ဒီ mascaraလေးက လှပတဲ့စိတျကူးတှကေို တကယျဖွဈလာစတေယျ။ Lash Milionizer brushလေးကွောငျ့ မကျြတောငျလေးတှကေ သပျရပျပွညျ့စုံစှာ လှပနစေတေယျ။ Smokey eyeလို မကျြလုံးမြိုးခွယျမယျဆိုရငျ အံ့အားသငျ့လောကျအောငျ လှပစပေါတယျ။
ထူထဲ၊ ရှညျလြား ၊ ကော့ညှတျတယျ ။ ဒီမကျြတောငျကော့ဆေးက အသကျရှူမှားလောကျတဲ့အလှမြိုးကို ဖနျတီးပေးနိုငျပွီး မကျြတောငျဆကျခွငျးနှငျ့ မကျြတောငျအတုတပျရခွငျးတှကေို နှုတျဆကျလိုကျနိုငျမှာပါ ။ မကျြတောငျတဈခြောငျးစီကို ဖုံးအုပျစပွေီး ၊ ရလဒျကတော့ သူမတူတဲ့ မကျြဝနျးတဈစုံကို ဖနျတီးပေးပါတယျ။ မကျြတောငျအရငျးနားကို ကပျပွီး ဟိုဘကျတှနျး ဒီဘကျတှနျးတဲ့ Zigzagပုံစံမြိုး Brushလေးနှငျ့ ကော့ပေးပါ ။ ပွီးရငျ အောကျမကျြတောငျကိုလညျး ကော့ပေးပါ။ နူးညံ့တဲ့အထိအတှကွေ့ောငျ့ ပိုပွီးမှ ထူထူလေးလိုခငျြရငျလညျး တဈထပျပွီးတဈထပျ ကော့ရတာလညျး လှယျကူပါတယျ။ အပျေါမကျြတောငျထိပျလေးတှကေိုလညျး သခြောလေး ကော့ပေးပါ။
#lashesonfleek! ထူထဲစေတယ် ၊ ရှည်လျားစေတယ်၊ ကော့ညွတ်စေပြီး ၊ ထူထူထဲထဲ မဲမဲနက်နက် မျက်တောင်ကို ရရှိစေပြီး တနေကုန် ၂၄နာရီကြာသည်အထိ လှပနေစေပါတယ်။ ဒီ mascaraလေးက လှပတဲ့စိတ်ကူးတွေကို တကယ်ဖြစ်လာစေတယ်။ Lash Milionizer brushလေးကြောင့် မျက်တောင်လေးတွေက သပ်ရပ်ပြည့်စုံစွာ လှပနေစေတယ်။ Smokey eyeလို မျက်လုံးမျိုးခြယ်မယ်ဆိုရင် အံ့အားသင့်လောက်အောင် လှပစေပါတယ်။
ထူထဲ၊ ရှည်လျား ၊ ကော့ညွတ်တယ် ။ ဒီမျက်တောင်ကော့ဆေးက အသက်ရှူမှားလောက်တဲ့အလှမျိုးကို ဖန်တီးပေးနိုင်ပြီး မျက်တောင်ဆက်ခြင်းနှင့် မျက်တောင်အတုတပ်ရခြင်းတွေကို နှုတ်ဆက်လိုက်နိုင်မှာပါ ။ မျက်တောင်တစ်ချောင်းစီကို ဖုံးအုပ်စေပြီး ၊ ရလဒ်ကတော့ သူမတူတဲ့ မျက်ဝန်းတစ်စုံကို ဖန်တီးပေးပါတယ်။ မျက်တောင်အရင်းနားကို ကပ်ပြီး ဟိုဘက်တွန်း ဒီဘက်တွန်းတဲ့ Zigzagပုံစံမျိုး Brushလေးနှင့် ကော့ပေးပါ ။ ပြီးရင် အောက်မျက်တောင်ကိုလည်း ကော့ပေးပါ။ နူးညံ့တဲ့အထိအတွေ့ကြောင့် ပိုပြီးမှ ထူထူလေးလိုချင်ရင်လည်း တစ်ထပ်ပြီးတစ်ထပ် ကော့ရတာလည်း လွယ်ကူပါတယ်။ အပေါ်မျက်တောင်ထိပ်လေးတွေကိုလည်း သေချာလေး ကော့ပေးပါ။
Volume Mascara. 180% more lash volume.*Study on 30 women. Lash measurement by instrumental photo analysis after application.